Janoary 24, 2022 0 Namaky 11 aho
Herintaona aty aoriana, misy vaksiny azon'ny olona dimy taona no ho miakatra any Etazonia, ary 63% amin'ny mponina any Etazonia no vita vaksiny tanteraka.
Na izany aza dia mitombo ny tranga, toy ny fanahiana momba ny karazana otrikaretina vaovao sy ny fipoahana.
Ny zava-misy dia ny COVID-19 dia mbola misy fiantraikany amin'ny fiainana andavan'andro - ary io fiaraha-miaina io dia ho mahazatra amin'ny ho avy. Ny viriosy dia fototry ny fiantraikan'ny tatitra momba ny indostrian'ny hotely tamin'ity taona ity, izay misy
naminavina ny fironana macroeconomic ary koa ny fiovan'ny fihetseham-pon'ny mpanjifa sy ny fandraharahana
Ny dingana manaraka amin'ny fanarenana dia tsy mitovy, mety hikorontana. Saingy zavatra iray no azo antoka: 2022 no taonan'ny dia "vaovao".
Ny fitsangatsanganana mahafinaritra - izany hoe, fampifangaroana ny fitsangatsanganana ara-barotra sy ny fialam-boly - dia nipoaka nandritra ny valan'aretina, izay maneho fiovana lalina amin'ny fihetsiky ny mpanjifa sy ny fitondran-tena mifandraika amin'ny dia. Izany, ho setrin'izany, dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fiasan'ny hotely rehefa mamaly ny filana sy ny andrasan'ny vahiny ny indostria.
Ny famantarana rehetra dia ny hirosoana mankany amin'ny fanarenana amin'ny 2022 ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny, saingy mbola taona maromaro sisa izany fanarenana tanteraka izany. araka
amin'ny famakafakana ho an'ny AHLA nataon'i Oxford Economics, ny fangatahana amin'ny alina amin'ny trano fandraisam-bahiny sy ny fidiram-bolan'ny efitrano dia antenaina hiverina amin'ny ambaratonga 2019 amin'ny
Ny vola miditra amin'ny efitrano dia vinavinaina hahatratra $ 168 miliara, ao anatin'ny 1% amin'ny tarehimarika 2019 ary
Nitombo 19% raha oharina tamin’ny taona 2021. Tombanana hahatratra 63.4% ny fibodoana, manakaiky ny tahan’ny 66.0% tratra tamin’ny 2019 ary nihoatra lavitra noho ny 44% sy 57.6% tamin’ny taona 2020 sy 2021.
Ny fiverenan'ny vola miditra amin'ny efitrano dia azo antoka fa vaovao tsara ho an'ny hotely, nefa izany no izy
tsy milaza ny tantara manontolo.
Na dia amin'ny fiverenana amin'ny fahombiazan'ny efitrano alohan'ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra aza, ireo tarehimarika ireo dia tsy mitanisa ny tombanana fanampiny mihoatra ny $ 48 miliara 5 amin'ny fandaniana alohan'ny areti-mifindra amin'ny sakafo sy zava-pisotro, toeram-pivoriana ary serivisy fanampiny - loharanom-bola antenaina hihemotra be. amin’ny fiverenany. Ny manam-pahaizana momba ny indostria dia manombatombana fa ny antsasaky ny fivoriana sy ny hetsika ihany no hiverina amin'ny 2022, 6 miaraka amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny variana Omicron mbola ho fantatra.
Fanampin'izany, ny trano fandraisam-bahiny manerana ny firenena dia manohy ny fikarohana ao anatin'ny roa taona izay nahavery $111.8 lavitrisa dolara amin'ny fidiram-bolan'izy ireo fotsiny. mpiasa, mampiasa vola amin'ny fanatsarana fananana tara, ary mameno ny tahirim-bolam-barotra.
Mbola misy rivo-doza mahery vaika sy mety hanakorontana ho amin'ny fahasitranana tanteraka. Na dia mety hiverina tanteraka amin'ny taona 2022 aza ny fitsangatsanganana fialamboly, ny fitsangatsanganana ara-barotra dia antenaina hitoetra eo ambanin'ny haavon'ny pre-pandemic. Mbola tsy mazava ny hamafin'ny fiantraikan'ny Omicron amin'ny indostrian'ny hotely.
Ankoatr'izay, ny variana amin'ny ho avy dia hiteraka fikorontanana eo amin'ny fiverenan'ny fialam-boly sy ny fitsangatsanganana ara-barotra ary an'arivony tapitrisa dolara mifandray amin'ny fandaniana fivoriana sy hetsika. Araka ny tatitry ny Cvent's November 2021 Group Business Insights Report, ny ampahefatry ny fivoriana azo alaina dia hybrid, ary ny 72% amin'ny drafitry ny fivoriana nohadihadiana dia mitady hetsika miaraka amin'ny singa manokana.
Hitohy hiady amin'ny tsy fahampian'ny mpiasa ny trano fandraisam-bahiny, hampihena ny fahafahan'izy ireo mampitombo ny fidiram-bolan'ny mpandeha. Ny tsindry amin'ny vidim-piainana dia midika fa na dia mety hitranga aloha aza ny famerenana ny anarana, dia haharitra hatramin'ny 2025 ny fanarenana marina ny indostria, araka ny filazan'ny STR sy Tourism Economics.
Na dia mbola an-taonany maro aza ny fanarenana marina ny haavon'ny valan'aretina, arakaraky ny takatry ny hotely, ny fiomanana ary ny famaliana ny filan'ny mpandeha "vaovao", ny ho avy mamiratra amin'ny indostria izay tena ilaina amin'ny Amerikana. toekarena.
Ny vinavinan'ny fitsangatsanganana amin'ny 2022 dia mandeha tsara, saingy mitohy
andrasana ny volatility, miaraka amin'ny taona fanarenana tanteraka. Ny tahan'ny fipetrahana
ary ny fidiram-bolan'ny efitrano dia vinavinaina hanakaiky ny ambaratonga 2019 amin'ny 2022, fa ny
tsy dia be fanantenana loatra ny vinavina momba ny fidiram-bola fanampiny. Andrasana ny fitsangantsanganana
hijanona nidina mihoatra ny 20% ho an'ny ankamaroan'ny taona, 58% ihany
ny fivoriana sy ny hetsika dia andrasana hiverina, ary ny vokatra ratsy feno ny
Tsy mbola fantatra ny Omicron. Ny rivotry ny asa dia midika ho haavon'ny asa
amin'ny faran'ny taona dia hidina 7% raha oharina amin'ny taona 2019.
Ny mpandeha "vaovao" dia manantena zavatra hafa amin'ny marika hotely. mpanjifa
ny antony manosika, ny fitondran-tena ary ny zavatra andrasana dia niova avokoa nandritra ny valan'aretina—
manova lalina ny fomba fiasan'ny hotely mba hanomezana fahafaham-po ny vahiny, izay
mihamitombo ny mety ho mpivezivezy fialamboly na bleisure na mpifindrafindra monina nomerika. Mitovy amin'ny
Vokatr'izany, ny teknolojia dia mbola hitsikera bebe kokoa amin'ny fahombiazan'ny fananana.
Ny fitazonana sy fanintonana talenta ambony dia midika hoe mampiseho ny lalan'ny asa,
tsy asa fotsiny. Ny hotely dia afaka manangana mpiasa ho an'ny ho avy amin'ny
mampita ny halalin'ny fahafaha-manao asa izay misy ao amin'ny
indostria ho an'ny mpiasa ankehitriny sy ho avy.
maharitra ny fandraisana andraikitra dia hanana anjara toerana lehibe kokoa
ny indostria. Hotely izay manao fanoloran-tena amin'ny tanjona maharitra sy
Tsy vitan'ny hoe manome fahafaham-po ny andrasan'ny vahiny ny fandaharana, fa manao izany
fiovana izay mahasoa ny orinasa ihany koa.
Hivoatra ny fandaharan'asa mahatoky ho setrin'ny tontolon'ny dia vaovao.
Miaraka amin'ny fivezivezena ara-barotra be dia be, ny programa tsy fivadihana nentim-paharazana no
lasa misy dikany. Ny programa mahatoky mahomby indrindra dia hanolotra bebe kokoa
valisoa manokana izay mahafeno ny filan'ny mpandeha ara-barotra tsindraindray
ary ny mpanao fialam-boly ihany koa.
FIVONANA FIVAVAHANA VOALOHANY POSITIF, FA MIJANONA MIVOLATILE
Ny fiovaovan'ny fitsangatsanganana amin'ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra dia mahatonga ny fahavononana vinavinaina ho manan-danja kokoa - nefa sarotra kokoa - noho ny hatramin'izay. Te handeha ve ny olona? Ho voafehin'ny zava-misy ara-toekarena midadasika kokoa ve ny drafitry ny diany? Manery azy ireo hanova ny drafitra ve ny famerana ny dia any an-trano na any amin'ny toerana halehany?
Raha tsorina, ny fahavononana hanao dia dia manondro ny fahavononan'ny olona hanao dia. Mba hahatakarana ny fahavononan'ny dia anio, dia nitodika tany amin'ny Accenture Travel Readiness Index izahay, fomba vaovao hanombanana ny fikasana hanao dia mifanaraka amin'ny zava-misy amin'ny tontolon'ny dia ankehitriny. Ny Index isam-bolana sy firenena maro dia manara-maso ny tondro fitsangatsanganana sy tsy fitsangatsanganana izay misy fiantraikany amin'ny fikasana ao anatin'izany ny toetry ny fahasalaman'ny firenena mifandraika amin'ny COVID-19, ny toe-karena amin'ny fotoana fohy, ny fitakiana dia ary ny toetry ny fivezivezena. Ireo tondro ireo dia lanjaina mba hanehoana ny haben'ny fiantraikany tsirairay avy amin'ny fahavononana dia.
Ny fahavononana dia tanjona mihetsika
Havaozina isam-bolana ny Index satria tsy tanteraka ny fahavononana dia. Ho marina izany raha mbola tsy voafehy tanteraka ny areti-mifindra ary ny onjam-peo vaovao, ny variana ary ny valin'ny governemanta sy ny fahasalamam-bahoaka dia mamerina hatrany ny fitokisan'ny olona sy ny fahatokisany amin'ny dia. Diniho, ohatra, ny haingan'ny fameperana fitsangatsanganana any amin'ireo firenena eran'izao tontolo izao rehefa nipoitra ny variana Omicron tamin'ny faramparan'ny taona 2021. Nosokajian'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana ho variana mampanahy izany tamin'ny 26 Novambra 2021, ary tamin'ny 2 Desambra 2021, ny Filoham-pirenena. Biden dia nanambara protocols vaovao ho an'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena.
Ny fironana amin'ny fahavononana dia amin'ny tapany faharoa amin'ny 2021 dia mampianatra ny tokony hatao
antenaina amin'ny 2022: ny firongatry ny paosy miaraka amin'ny fiatoana sy fanombohana vokatry ny
tondro dia iray na maromaro.
Ny sary manerantany
Miaraka amin'ny fangatahan'ny olona maro sy ny olona maro misafidy ny handeha na hiverina amin'ny fiainana andavanandro miaraka amin'ny viriosy eo amin'izy ireo, ny fahavononana dia nahita fiakarana 5% tamin'ny Septambra 2021 raha oharina tamin'ny Aogositra 2021 eran-tany. Na izany aza, ny fironan'ny fahavononana dia nivadika hatrany hatramin'ny faran'ny taona. Nihena 2021% ny volana Novambra 2 raha oharina tamin'ny volana teo aloha noho ny valan'aretina sy ny famerana ny dia. Fahavononana amin'ny ankapobeny in
tamin'ny Novambra 2021 dia niova ho +23% raha oharina tamin'ny taona 2019.
Ny US Picture
Tamin'ny Septambra 2021, nihena 3% ny tsenan'i Etazonia tamin'ny Aogositra 2021 noho ny fameperana henjana ho an'ireo mpandeha iraisam-pirenena. Ny fifamoivoizana an'habakabaka sy ny fibodoana hotely dia nanaraka ny lamina ara-tantara, nianjera taorian'ny fahavaratra mahery vaika ary nampiseho hery tamin'ny fararano. Niakatra tampon'isa 2 tapitrisa mahery ny mpandeha an'habakabaka tamin'ny volana Jolay, ary nahatratra 71% ny trano fandraisam-bahiny.
Tamin'ny volana Novambra, ny fanalefahana ny famerana ny fitsangatsanganana Eoropeana mankany Etazonia dia nitarika fitomboana lehibe amin'ny fahafahan'ny zotram-piaramanidina, izay midika firongatry ny fangatahana.
12 Nanohy nanokatra dia ilay firenena rehefa tonga ny fotoam-pialan-tsasatra. Raha ny marina, ny herinandro Thanksgiving 2021 dia vaky firaketana ho an'ny trano fandraisam-bahiny amerikana — 53% ny tahan'ny fibodoana, ary ny RevPAR dia 20% ambony noho ny tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona 2019.
Aretina maneran-tany misy fiantraikany eo an-toerana
Tsy ny fahavononan'ny mpandeha an-trano ihany no tsy maintsy ataon'ny indostrian'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny maha-mpanentana ny fangatahana amin'ny taona 2022. Mpijery manan-danja ihany koa ny mpandeha iraisam-pirenena.
Ny mpandeha iraisam-pirenena dia nahatratra 15% amin'ny fandaniana fitsangatsanganana amerikana tamin'ny taona 2019 talohan'ny nanombohan'ny valan'aretina, fa 6% fotsiny tamin'ny taona 2020.15 Tamin'ny taona 2022, ny World Travel & Tourism Council dia mikasa ny fiakarana 228% amin'ny fandaniana any Etazonia amin'ny alàlan'ny mpandeha iraisam-pirenena raha oharina amin'ny 2021.
Ny fiomanana amin'io fisondrotana io dia midika hoe manaiky fa ny fihetseham-po momba ny dia sy ny fahavononana fitsangatsanganana dia tsy mitovy amin'ny firenena tsirairay satria ity krizy eran-tany ity dia tena misy fiantraikany eo an-toerana. Ny trano fandraisam-bahiny mieritreritra ny fahavononana amin'ny alàlan'ny zavatra niainan'ny olona voan'ny areti-mifindra — ary ankehitriny — no toerana tsara indrindra hamaritana raha mila mampiditra fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana fanampiny izy ireo mba hanintona ireo mpandeha ireo.
Ity no ambaran'ny Index momba ny fahavononana fitsangatsanganana amin'izay antenaina ho tsena miditra manakiana ho an'i Etazonia.
Ny fisalasalana sisa tavela momba ny toetran'ny variana Omicron tamin'ny fotoana namoahana azy dia milaza fa sarotra ny maminavina ny fahavononan'ny dia amin'ny taona 2022. Ny azo eritreretina dia mety hijanona hatramin'ny volana martsa ny fameperana apetraka hiadiana amin'ny variana Omicron. Ankoatr'izay, ny anton-javatra fohy maromaro dia mety hisy fiantraikany amin'ny fahavononana dia ho tsara na ratsy, ary amin'ny ankapobeny, tsy manantena izahay fa ny Index dia hampiseho famantarana tsy tapaka amin'ny fahasitranana mandra-pahatongan'ny tapaky ny taona 2022 amin'ny voalohany.
Ny fahavononana fitsangatsanganana dia hampahafantatra ny fomba fiasan'ny indostrian'ny hotely amin'ny faritra manan-danja ao anatin'izany ny fibodoana, ny fidiram-bolan'ny efitrano, ny asa ary ny filan'ny mpanjifa. Na dia tsy hahita fiverenana feno amin'ny 2022 aza ny taona 2019, ny fijery dia matanjaka kokoa noho ny tamin'ny 2021.
Ny fibodoan'ny hotely dia antenaina hiakatra miakatra avy amin'ny ambany manan-tantara tamin'ny 2020, amin'ny antsalany 63.4% ho an'ny taona, araka ny filazan'ny STR sy Tourism Economics.
Tamin'ny taona 2019, hotely efa ho 60,000 eo amin'ny firenena no niaina salanisan'ny trano fandraisam-bahiny 66% isan-taona, nivarotra efitrano 1.3 miliara. Ny areti-mifindra dia nitondra ny fipetrahan'ny hotely amerikana tamin'ny 24.5% tamin'ny volana aprily 2020, ary nidina ho 44% ny fibodoana isan-taona ho an'ny taona. Ny trano fandraisam-bahiny ho an'ny taona 2021 dia tombanana ho eo amin'ny 58% — isa dimy feno avo kokoa noho ny novinavinaina tamin'ity tamin'ny taon-dasa (52.5% vinavina), saingy mbola nidina mihoatra ny valo isan-jato avy amin'ny ambaratonga prepandemic.
Na dia misy trano fandraisam-bahiny feno serivisy aza dia manomboka miasa amin'ny 50% amin'ny fibodoana, dia tsy mihatra amin'ny trosan'ny trosa sy ny fandaniana hafa izany. Noho izany, ny ankamaroan'ny hotely dia nandany ny roa taona farany teo ambanin'ny teboka farany, niantehitra tamin'ny tahiry mba handoavana ny fandaniana. Noho izany, na dia miverina amin'ny toerana akaikin'ny valan'aretina amin'ny taona 2022 aza, ny hotely dia manana fomba handehanana alohan'ny tena fanarenana. Ny tahan'ny fibodoana dia vinavinaina hiakatra hatrany amin'ny 2022, amin'ny antsalany 63.4% ho an'ny taona.
Sary 1 – Ny fipetrahan'ny efitranon'ny hotely araka ny taona
Ny vola miditra amin'ny efitrano
Rehefa nilatsaka saika 50% tamin'ny taona 2020, dia saika hiverina ny vola miditra amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Level 2019 amin'ity taona ity. Ny fandaniam-bola fanampiny tsy misy efitrano dia mbola hihemotra.
Talohan'ny areti-mifindra, ny efitrano fandraisam-bahiny 5.4 tapitrisa ao amin'ny indostrian'ny hotely dia niteraka vola mihoatra ny $ 169 lavitrisa isan-taona, izay tsy tafiditra ao anatin'izany ny am-polony tapitrisa fanampiny nateraky ny fanofana efitrano fivoriana sy loharanom-bola fanampiny hafa.
Tamin'ny taona 2020, ny fidiram-bolan'ny efitranon'ny hotely dia nihena efa ho 50% manerana an'i Etazonia ho $85.7 lavitrisa fotsiny, avy eo niverina ho $141.6 lavitrisa tamin'ny 2021. Midika izany fa tao anatin'ireo roa taona ireo, ny hotely dia very $111.8 lavitrisa amin'ny fidiram-bolan'ny efitrano fotsiny. Ny fidiram-bolan'ny efitrano dia vinavinaina hahatratra $ 168.4 miliara amin'ity taona ity, na ao anatin'ny iray isan-jato amin'ny ambaratonga 2019.
Ny fijery ny fidiram-bola fanampiny avy amin'ny fivoriana, hetsika ary sakafo sy zava-pisotro — tombanana ho 48 lavitrisa dolara isan-taona talohan'ny areti-mifindra — dia tsy dia mazava loatra. Knowland dia tetik'asa fa ny 58.3% amin'ny fivoriana sy ny hetsika ihany no hiverina amin'ny 2022, miaraka amin'ny 86.9% miverina amin'ny 2023, midika izany fa ny ankamaroan'ny vola miditra dia mbola tsy hita.
Sary 2 - Ny vola miditra amin'ny efitranon'ny hotely isan-taona
Amin'ny faran'ny taona 2022, ny hotely dia andrasana hampiasa olona 2.19 tapitrisa — 93% amin'ny
ny haavon'izy ireo talohan'ny areti-mifindra.
Tamin'ny taona 2019, ny hotely amerikana dia niasa mivantana mihoatra ny 2.3 tapitrisa. Taorian'ny fihenan'ny taona 2020, ny hotely dia nahavita ny taona 2021 tamin'ny 77% amin'ny haavon'ny asa 2019.
Na dia antenaina aza ny fitomboana matanjaka amin'ny taona ho avy, ny hotely dia vinavinaina hifarana amin'ny 2022 miaraka amin'ny mpiasa 2.19 tapitrisa — nidina 166,000 na 7% raha oharina tamin'ny taona 2019, taratry ny fitohizan'ny rivodoza eo amin'ny tsenan'ny asa.
Sary 3 – Asa isan-taona
Ny filan'ny mpanjifa
Mitaky fitakiana fitsangatsanganana - indrindra amin'ireo mpandeha tanora.
Taorian'ny volana maromaro nanaovana confinement sy fameperana fitsangatsanganana tany am-piandohan'ny valan'aretina, dia maro ny Amerikanina naniry ny handeha indray tamin'ny 2021; izany fitakiana izany dia heverina fa hitohy amin’ity taona ity. Araka ny tatitra nataon'ny Morning Consult's State of Travel and Hospitality Q4 Report, 64% amin'ny olon-dehibe amerikana no nilaza fa nandeha tamin'ny taon-dasa izy ireo, miaraka amin'ireo mpanjifa tanora kokoa sy manana fidiram-bola ambony.
Hitan’ny tatitra ihany koa fa tamin’ireo firenena valo nanaovana fanadihadiana, dia ny Amerikanina no anisan’ny tena naniry mafy ny hidina an-dalambe, ka ny 50% no manantena ny hanao dia lavitra ao anatin’ny enim-bolana manaraka.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny Accenture's 2021 US Holiday Shopping, 40% amin'ny mpanjifa amerikana dia mikasa ny hifantoka amin'ny fitahirizana fialan-tsasatra na dia lavitra amin'ny ho avy. Ny fitahirizana fitsangatsanganana no laharam-pahamehana ara-bola faharoa manan-danja indrindra amin'ny mpanjifa aorian'ny fandoavana trosa (sary
Ny 43% feno dia manantena ny handeha lavitra na mihoatra mandritra ny enim-bolana ho avy raha oharina amin'ny enim-bolana mitovy amin'ny taona 2019.
Sary 4 – Laharam-pahamehana ara-bola 5 ambony indrindra an'ny mpanjifa amerikana tamin'ny taona 2022
Tena maniry ny hivezivezy indray ny Gen Z sy ny Arivotaona, na dia mbola mila toky aza izy ireo mba hanao izany. Ny ampahatelon'ity vondrona ity dia mino fa ny fampahalalana ara-potoana, ny fitantanana tsara kokoa ny fandehan'ny mpandeha, ary ny fahafahana mamandrika sy manamarina ny satan'ny vaksiny amin'ny alàlan'ny dia. orinasa apps dia handresy lahatra azy ireo handeha indray.
More on: Business | Hotel | Thanksgiving | Fitantanana ny fiarovana fitaterana | Hospitality | Millennials | airline | Covid-19 | Etazonia | fahasalamana | Employment | Fitetezam-barotra | World Health Organization | RevPAR | fikambanana | Tourism | Accenture
Fomba dimy hiarovana anao mandritra ny vonjy taitra ara-pahasalamana ny drafitry ny aretina mafy fahasalamana|
SAUDIA: Fiaraha-mientana vaovao ao amin'ny tsenan'ny fitsangatsanganana arabo airline, fahasalamana|
Ny rafitra fanaraha-maso voalohany dia mampandre ny First Responders amin'ny loto entin'ny rivotra Etazonia|
AccentureairlineBusinessFitetezam-barotraCovid-19EmploymentfahasalamanaHospitalityHotelMillennialsfikambananaRevPARThanksgivingTourismFitantanana ny fiarovana fitateranaEtazoniaWorld Health Organization
Previous Minnesota dia maniry ny ho toerana halehanao amin'ny Andro fialan-tsasatra nasionaly
Manaraka Ilay Mpizahatany Vaovao: Mitady tanjona rehefa misokatra indray izao tontolo izao